I-Alcatel U5, ukuqala kokuvela | I-Androidsis
I-Alcatel U5, ukubonakala kokuqala
UAlfonso de Frutos | | MWC
I-Alcatel inxibe phakathi kuluhlu phakathi kwenkcazo yokugqibela yeemveliso zayo. Kuhlelo lokugqibela lwe-MWC 2017, umenzi uveze iimodeli ezintathu ezintsha, i Alcatel A5, Alcatel A3 kunye Alcatel U5.
Sele ndikunikile ukubonakala kwam kokuqala emva kokuzama kakhulu i Iselfowuni A5 njengaye i-A3, ngoku lithuba le I-Alcatel U5, uluhlu lokungena oluza kungena kwintengiso ngexabiso lama-99 euros Ngenjongo yokuhlasela uluhlu lokungena ngesiphelo sendlela elula.
Ngokubhekisele kuyilo, sijongane nesiphelo esiqhelekileyo. Ifowuni inomzimba owenziwe nge-polycarbonate ethi, nangona igqityiwe, izive ilungile esandleni. I-Alcatel U5 ayikho nkulu kakhulu kwaye inokubanjwa kakuhle kwaye isetyenziswe ngesandla esinye.
Amaqhosha anikezela ngaphezulu kokuhamba ngokuchanekileyo kunye noxinzelelo olwaneleyo. Zombini iqhosha lolawulo lwevolumu kunye ne-terminal on / off key zibekwe kwicala lasekhohlo lefowuni.
Njengoko uza kubona, uyilo olungaveli nangayiphi na indlela kodwa esingasayi kubuza kakhulu kuyo ukuba sithathela ingqalelo uluhlu eya kuba kulo Alcatel U5.
Isixhobo sehardware silinganiselwe. Lakhe Iscreen se-intshi eyi-5 Ayinaso isisombululo se-HD, ihlala kuma-pixels angama-854 x 480. Isikrini silungile kwaye asimeme ukuba ubukele iividiyo kuso, ukuba ndinyanisile.
Ngokubhekisele kwezinye iinkcukacha zobuchwephesha bale Alcatel U5, yithi ine-processor ye-quad-core IMediaTek MT6737M kunye ne-1 GB ye-RAM kunye ne-8 GB yokugcina ngaphakathi enokwandiswa ngokusebenzisa ikhadi layo elincinci le-SD.
Ikhamera ephambili yefowuni yenziwa yilensi ye 5 megapixels ngefleshi Ngelixa ikhamera yangaphambili ihlala kwi Ii-megapixels ezi-2. Su I-2.050 mAh ibhetri Iya kuba ngaphezulu kokwaneleyo ukuxhasa ubunzima obupheleleyo behardware yefowuni esebenzayo, ngaphandle kwemfuno ezingaphezulu.
Into enkulu kodwa endiyifumanayo yile Iselfowuni U5 iza kufika nge-Android 6.0 M. Ngelixa kuyinyani ukuba iihardware zabo zilinganiselwe, banokuthi babandakanye nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza kaGoogle. Kwaye xa ucinga ukuba ezinye iimodeli ezimbini ziya kuza nazo nge-Android 6.0 M, kubonakala ngathi iAlcatel ayinomdla kakhulu kwi-Android 7.0 Nougat. Okanye ubuncinci okwangoku.
Kwaye ukuba le fowuni iya kufika kwimarike kude kube Ngenyanga kaMeyi, ngexabiso lama-99 euros, Ke basakhupha uhlaziyo, nangona ndikuthandabuza kakhulu. Ifowuni enobulumko kakhulu ethi, ngokoluvo lwam, inehardware esezantsi kakhulu kunokhuphiswano lwayo.
Ukujonga ixabiso layo, sinokufumana ezinye izisombululo ezingabizi kakhulu ngaphandle kokuya kumaphepha amaTshayina ukuya kuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi. Ukujonga ngokukhawuleza kwimarike ndibone iifowuni ezingcono, ezinje nge-ZTE Blade A452 ebiza ngoku njengeAlcatel U5 kodwa inekhamera ebalaseleyo kunye nesikrini se-HD.
Andiqondi ukuba namhlanje umenzi uyibeka njani ifowuni ngezi mpawu ngexabiso elisimemayo ukuba sifune ezinye izisombululo ezingcono. Njengesiqhelo, kuya kufuneka silinde ukwenza uhlalutyo olunzulu ngakumbi kwesi sigxina, kodwa ukubona izixhobo ezenziwa yiAlcatel U5 kunye nescreen sayo, kuyandinika ukuba le fowuni ayizukuphumelela kakhulu kwintengiso. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » MWC » I-Alcatel U5, ukubonakala kokuqala
Isimbo sokubukela se-LG, le yewotshi entsha ye-LG
UXiaomi uthengisa isigidi seRedmi Qaphela 4 ngeentsuku ezingama-45 eIndiya